लघुकथा : खुसी | साहित्यपोस्ट
ऋषिराम भुसाल	 प्रकाशित ७ मंसिर २०७८ १२:०६
रामु र नीताको जोडी चखेवा चखेवीको जस्तो थियो । दुबै मिलेर काम गर्थे । सँगै घुम्थे । देख्नेहरूले आहा ! सुन्दर जोडी, कति मिलेका भन्थे ।सबै राम्रो थियो ।
समय बित्दै गयो । आम्दानी घट्यो । बच्चाले घेरे, खर्च बढ्यो । दुख अनुसार सुखको अनुभूति भएन । नयाँ लुगा लगाउने, घुम्ने चाहनामा ठेस लाग्यो । नीताले रामुलाई “विदेश गएर भए पनि पैसाको जोहो गर्नुस्” भनिन् । रामुले वास्ता नगरेपछि नीता रिसाउन लागिन् । नीतामा निराशा र कुन्ठाले प्रवेश पायो । घरको वातावरण बिग्रियो । रामु अन्यौलमा पर्‌यो । सुन्दर संसारमा हुरी छिरेर सपना बढार्ने डर रामुलाई भयो । एकदिन रामुले नीतालाई राम्रोसँग सम्झायो ।
“हेर ! पृथ्वीमा पनि एकनास छैन । ऋतु अनुसार वायु चल्छ । शिशिरमा हुरी आउँछ । वसन्तमा हरियाली छाउँछ । गृष्ममा तातो हावा चल्छ । वर्षामा मनसुनी वायुले पानी पारेर भेल पैह्रो आउछ । हेमन्तमा तुसारो पर्छ । शक्तिशाली सूर्यलाई बादलले छेकेर अँध्यारो पार्छ । बादललाई हावाले उडाउँछ । हावालाई पहाडले छेक्छ । कहिले असिना, कहिले हिउँ पर्छ । हामी त मान्छे हो ।पृथ्वीमा जस्तै हाम्रो जीवनमा पनि कहिले बहार कहिले कहर छिर्छ । हामीले सबै सहनु पर्छ । वर्षाको अँध्यारो सकिएर धर्तीमा शरद्को आभा प्रवेश गर्छ । धैर्य गरे हामीमाझ मडारिएको औंसीको कालो अन्धकारलाई पूर्णिमाले चिर्नेछ । हाम्रो दु:ख सकिएर सुनौलो बिहानी फिर्नेछ । मिलेर काम गरौँ । सकारात्मक सोचौँ । पक्कै राम्रो हुनेछ ।”
मनसुनी वायुले पृथ्वीमा हुने प्रभाव जस्तै मान्छेको जीवनमा पनि उतार चढाव आउने कुराको बोधले नीताको मन छोयो । उनले गल्ती महसुस गरिन् । आशाको सानो किरण पुञ्ज सुटुक्क घरमा छिर्‌यो ।दुबैले मिलेर काम गरे । शिशिरमा झरेका पात पलाए । वसन्तको हराभरा सुरु भयो । रामुले भने झैँ समयानुसार परिबर्तन आएको नीताले महसुस गरिन् । दुबै खुसी भए ।
पद्मश्री चाैथाे, मदन पुरस्कार विजेता सूचीमै अटाएन